ကိန္နရီကျွန်းများအပိုင်း 1 DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 1.57 GB ကို
downloads ရယူရန္ 150 575
ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျး အရီကျွန်းစု, စပိန်ပိုင်တစ်ကျွန်းစု၏အကြီးစားရှုခင်း၏။
ရှုခင်း၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းဝင်ရောက်ဖို့ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ. ဒါဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်အပိုင်း 1 ရှေ့တော်၌အပိုင်း2တပ်ဆင်ရန်အကြံပြုသည်။
photo-ကိုမှန်ကန်ပုံရိပ်တွေသူတို့အများပြည်သူနှင့်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, IDE ဆာဗာစပိန်အစိုးရဆီကရယူခဲ့ကြသည်။ ရုပ်ပုံ resolution ကို 1m / pixel (HD) ဖြစ်ပါသည်, 85% ချုံ့။ အဘယ်သူမျှမ texture ညဥ့်အခါ။ အဆင်းလှသောပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ကမ်းခြေနှင့်အတူ clipping ပါဝင်သည်။ လွဲချော်ခံရဖို့မတစ်ဦးကရှုခင်း!
'', La Gomera '' ၏ကျွန်းထူးခြားအလွန်မြင့်မား resolution ကိုဖြန့်ဝေသည် 0.40 မီတာ / pixel! VFR ပျံသန်းမှုများအတွက်စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုကို။
Institut National Geographic "© INSTITUTO GEOGRÁFICO Nacional DE Espana" - အဆိုပါရှုခင်း (အပိုင်း 1 နှင့် 2) ကိုပထဝီဒေတာ IGN ထံမှရရှိသောခဲ့ကြသည်တစ်ကွက် (မြင့် Data) LOD13 (5 မီတာ) နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီဗူး (သာတစိတ်တပိုင်း 1) ကိုအောက်ပါလေဆိပ်ပါဝင်: GCHI : Hierro လေဆိပ်, GCTS : Tenerife တောင်ပိုင်းလေဆိပ်, GCXO : Tenerife မြောက်ကိုရီးယားလေဆိပ်, GCGM :, La Gomera လေဆိပ်, GCLA :, La Palma လေဆိပ်။
အဆိုပါရှုခင်းကိုသင် Canarysim install လုပ်ပြီးပါကဒီတစ်ခုဖြင့်အစားထိုးရမည်ဖြစ်သည် CANARYSIM နဲ့မကိုက်ညီဘူးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနေရီကျွန်းစုဆယ်ခုနစ်စပိန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကအကြောင်း 150 မိုင်အနောက်ဘက်မော်ရိုကိုနှင့် 1000 ကီလိုမီတာထက်ပိုရီးယန်းကျွန်းဆွယ်၏တောင်ဘက်မှတစ်ဦးသည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကျွန်းစုတွင်တည်ရှိပါသည်။
အဆိုပါကျွန်းစုအ Macaronesia ခြင်း, မီးတောင်ကိန္နရီကျွန်းစု Selvagens ကျွန်းများ ( "အင်ဒီးယန်း") အပါအဝင် Madeira ခြင်း, အာ့ဇိုရီစ်နှင့်ကိပ်ဗာဒီကျွန်းစုပါဝင်သောပထဝီဒေသ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
လာ့စ်ဗီး Palma နှင့် Santa Cruz က de Tenerife: ဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂ၏ပြင်ဘက်မှာဒေသများအဖြစ်သတ်မှတ်နှစ်ခုပြည်နယ်များသို့ခွဲခြားထားပါသည်။ 1927 တိုင်အောင်, Santa Cruz က de Tenerife ကျွန်းစု၏တစ်ခုတည်းသောမြို့တော်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤမြို့သည်ယခုနှစ် မှစ. , ကိန္နရီ၏လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်သည့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Las Palma de Gran Canaria ၏မြို့နှင့်အတူတိုင်းလေးနှစ်, ဒီ feature ကိုဝေမျှ 1910 ကတည်းကကျွန်းစုမြို့။
Rex 2.0 ၏ထို့အပြင်တွေနဲ့ရှုခင်း၏ဗီဒီယို:
သတိပြုရန်အလွန်ကြီးမားဖိုင် 1,57 Go ကိုထိုသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဥပမာ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ဖမ်းဆီး၏အချက်မှာခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကို download accelerator software ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြု FlashGet).